निर्वाचित नेताजीहरु : कुन बाटोमा ? « Loktantrapost
निर्वाचित नेताजीहरु : कुन बाटोमा ?
२८ असार २०७४, बुधबार ११:०४
स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गाउँ पालिकादेखि महानगर पालिकासम्ममा जनताले छानेका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन् । जनताको नजरमा निर्वाचित सबै गाउँदेखि महानगरसम्मका नेता हुन् । दलीय व्यवस्थाका कारण छानिएका प्राय सबै जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै राजनीतिक दलबाट नै छन् । राजनीतिमा सकृय भए वापतको यो जिम्मेवारी स्वाभाविक हो । अझ यो जिम्मेवारी पाउनकै लागि राजनीतिमा होमिनेहरुको पनि कमी छैन । तर राजनीतिमा सकृय हुनुको अर्थ यतिमा सीमित हँुदैन ।
नेता शव्द महिला पुरुष दुवैको लागि समान अर्थमा प्रयोग हुन्छ त्यसैले मैले सम्मानपूर्वक सबैलाई नेता भन्न रुचाएँ । तपाईले नै पार्टीबाट टिकट पाउनुको कारण के के होलान् ? किनकि तपाई जस्तै धेरै जनाले तपाईको स्थानमा टिकट पाउन चाहेका थिए । यसको जवाफ आपैmले खोज्नु होला र कारण नभुल्नु होला भन्ने सुझाव मात्र हो । तपाईले नै चुनाव किन र कसरी जित्नु भयो ? अर्थात मतदाताको अधिक मत तपाईलाई नै किन आयो होला ? यसका बारेमा पनि आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् र मतदाताको सधै सम्मान गर्नुहोला । अब तपाईलाई मत नदिने जनताको पनि तपाई प्रतिनिधि हुनु भएको छ यो कुराको सधै ख्याल गर्नु होला । धेरै क्षेत्रमा यस्तो अवस्था छ कि तपाईले भएका उमेद्वार मध्ये धेरै मत पाएर जित्नु भयो तर तपाईले पाएको मतभन्दा पनि धेरै मत तपाईलाई मत नदिनेहरुको अर्थात तपाईलाई नरुचाउनेहरुको छ ।
तपाईले चुनावमा कसरी अरु उम्मेद्वारको भन्दा धेरै मत पाउनु भयो ? कारणहरु कहिल्यै नविर्सनुहोस् । राजनीतिक आस्थाका मत होलान्, तपाईलाई विश्वास गर्नेहरुको मत होलान्, तपाईलाई नजिक ठान्नेहरु होलान् यसका अतिरिक्त अरु पनि कारण हुन सक्छन् । चुनावमा तपाईलाई नजिकै बसेर सहयोग गर्नेहरुको ठूलै पङ्ति होला । कसैले तपाईले नमागी तर थाहा दिएर आर्थिक सहयोग गरेका हुन सक्छन् । कसैले तपाईले थाहा नपाई सहयोग गरेका हुन सक्छन् । कति त तपाईलाई सहयोग गरिरहेको छु, तपाईको जितका लागि मेरो ठूलो योगदान छ भनेर देखाउन तपाईलाई देखाउने गरी तपाईकै वरिपरि घुमिरहने र तपाईलाई प्रभावमा पार्नेहरु पनि होलान् । अर्का एकखालका मानिस पनि तपाईको नजिकै छन् । ती हुन् तपाई चुनाव जित्नका लागि खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर विभिन्न बहानामा तपाईको नाममा वा तपाईबाटै पैसा लिने र त्यसैबाट नाफा खोज्ने गर्छन् । तपाईले विभिन्न खाले मानिसलाई राम्ररी चिन्नुपर्छ । किनकि तिनको भूमिका सकिएको छैन ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको एक मतदाता एक मत हो । यहाँ कुन विद्वान, कुन ठूलो, कुन धनी कुनै फरक हुँदैन । त्यसैले साधारण चेत भएका कतिपय मतदाताले यस्तो मतलाई निर्वाचनका समयमा मोलतोलको विषय बनाउने गर्छन् । कतैकतै सामाजिक ठेकेदारहरु देखिन्छन् र मेरो प्रभावमा यति मत छन् भनेर पनि मोलतोल हुने गर्छ । कहिँ व्यक्तिगत र कहिँ सामाजिक आवरणमा मत प्रभावमा पार्न मोलतोल र लेनदेन गरिन्छ । अविकसित समाजमा यसखालको लेनदेनलाई सामान्य मानिन्छ । चुनावमा यसखालको प्रयोग भएकै थिएन भन्न सकिदैन । तर चुनाव जितिसके पछि मतदाताले मेरो मूल्याङ्कन गरेर कहाँ दिएका हुन् र मैले त यति खर्च पो गरेको थिएँ भन्ने भाव राखेर व्यवहार गर्नु हुँदैन । यति हो म यहाँ कसरी आइपुगेँ भनेर सधै ख्याल गर्नुपर्छ सम्म भनिएको हो । त्यसो भएमा तपाईले आफुलाई गल्ति भएका ठाउँमा सच्याउने अवसर, समय र होस पुर्याउन सक्नुहुन्छ ।
अब आपैmलाई बारम्बार सोध्नुहोस् तपाई किन यो स्थानमा हुनुहुन्छ ? नेता हुने मानिससँग नेता हुनुको दुईवटा कारण हुने गर्छन् । एक, नेता हुन र अर्को काम गर्न । तपाईको अन्तर्मनको आवाज के हो ? भन्न त सबैले काम गर्न भन्छन् तर सबैले काम गर्दैैनन् । किनकि उनको अन्तरमनको आवाजले भनिरहेको हुन्छ तँ नेता भईस् अरुको लागि होइन आप्mना लागि हो । तँ आप्mना प्रयासले नेता भएको होस् । जसले तलाई रोक्न खोजे ती तेरा दुश्मन थिए र जसले सहयोग गरे तिनले स्वार्थका कारण सहयोग गरे । त्यसैले तैले तेरो विरोध गर्नेलाई ठेकान लाउनुपर्छ । जे गर्छस् आप्mना लागि गर । किनकि फेरि नेता हुन तलाई साम, दाम, दण्ड, भेद सबै चाहिन्छ ख्याल गर नत्र तँ फेरि नेता हुन योग्य छैनस् । नेताको मनमा अर्को स्थान पनि छ त्यसले भन्छ तैले जीवनमा ठूलो अवसर पाएको छस्, यस्तो मौका सधै आउँदैन, सबैलाई आउँदैन, तेरो समय धेरै छैन । तैले गरेर देखाउने बेला यहि हो, काम सुरु गरिहाल । तपाई कुन बाटो लाग्ने हो तपाईले बारम्बार आफुलाई सोध्ने र कुनै एक बाटोमा लाग्ने हो । नेताका अगाडि धेरै विकल्प छैन ।
नेता हुनु भयो, सलाम, नमस्कार थाप्नुहोस्, चाकडी गर्न आउनेहरुले घेर्नेछन् प्रशंसा गर्ने छन्, तपाईलाई महान बनाउने छन्, तपाई मख्ख पर्दै जानुहुनेछ । सुखसयल, ऐसआराम र भोगविलासको लागि उक्साउने छन्, कमाउने बाटो देखाउने छन्, कहिल्यै कसैले थाहा पाउँदैनन् हजुर भनेर विश्वस्त पार्नेछन् । यो त यहाँ सबैले गर्छन् हजुर चलन नै बसेको छ, चलन विगार्नु हुँदैन हजुर भन्नेछन् । किनकि तपाईको मति भ्रष्ट नपारी उनले कमाउन सक्ने छैनन् । तपाईको स्वस्थ आलोचना गर्ने र तपाईलाई सहि बाटोमा हिँडाउन चाहनेहरुलाई तपाईको दुश्मन करार गर्नेछन् र यस्ताबाट सँधै होसियार रहनुपर्छ हजुरले भनेर नजिकिने छन् । यहाँ तपाईले गर्नु खासै पर्दैन जे गर्छन् अरुले गर्छन् । जान्नु खासै पर्दैन किनकि तपाईले धेरै जान्नुभयो भने अरुलाई असजिलो पर्नसक्छ । त्यसैले तपाईलाई सिक्न प्रेरित गरिदैन । हजुर अति नै बाठो, चतुर, महान भनेर हुस्सु बनाइन्छ । भण्डारबाट पैसा र सुविधा लोभिपापीलाई पुग्दो बाँड्दै जानुहोस् तपाईको जयजयकार हुँदै जानेछ ।
नेताको लागि अर्को बाटो छ । समय थोरै छ, काम धेरै छ । काम के हो ? असल मित्र को हो ? को औसर छोप्न अघिपछि छन् ? नेताले थाहा पाउनु पर्छ । थाहा पाउन आपैmमा क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । क्षमता विकासका लागि निरन्तर सिक्न सक्नु पर्छ । कामलाई बुभ्mनु पर्छ । जनहित केमा छ ? थाहा पाउनु पर्छ । कर्तव्य थाहा पाउनु पर्छ । कानुन बुभ्mनु पर्छ । काम गर्ने र नगर्नेलाई चिन्नु पर्छ । योजना किन, केका लागि ? थाहा पाउनु पर्छ । कामले के नतिजा दिन्छ र त्यसबाट जनताले के के फाइदा पाउँछन् थाहा पाउनु पर्छ । लगानी र प्रतिफलको तुलना भइरहनु पर्छ ।
नेता एक्लैले काम गर्ने होइन कामका लागि योग्य मानिसको आवश्यक पर्छ । काम गर्नेहरुको टिम बनाउनु पर्छ । नेताको क्षमता उनको सोच्ने तरिका र सिक्ने क्षमतामा भरपर्छ । आप्mनो ठाउँको विशेषता के हो ? नेताले थाहा पाउनु पर्छ । साधन र श्रोतको पहिचान गर्नु पर्छ । आप्mना टिमका मानिसको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । उचित संयोजन र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । आप्mनो ठाउँलाई कस्तो बनाउने नेताले सपना देख्नुपर्छ । सपना पुरा गर्न नेताले टिम बनाउन सक्नुपर्छ । टिममा योग्य मानिसको छनोट एकदमै महत्वपूर्ण कार्य हो । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई दण्ड दिन सक्नुपर्छ । सबैको प्यारो बन्ने नाउँमा कामचोरहरुलाई काखिच्याप्दा काम गर्ने जाँगर भएकाहरुको पनि उत्साह मर्न सक्छ ।
नेताले सधै कामको नतिजामा ध्यान दिनुपर्छ । नतिजा निकाल्न कर्म अर्थात एक्सनको जरुरी हुन्छ । एक्सन सही ठाउँ र सही समयमा हुन जरुरी छ । यसको लागि नेताको निर्देशन, निर्णय र निगरानी एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो काम पटक्कै सजिलो छैन । तपाई हिँडन चाहेको यो बाटोमा तपाईबाट फाइदा लिन चाहनेहरु सबैभन्दा पहिला रुष्ट हुनेछन् र तपाईको विरोध गर्न थाल्नेछन् तर जसले फाइदा पाउने हुन् उनीहरु टाढै बसेर चुपचाप तपाईको कर्म हेरिरहेका हुनेछन् । विरोधले तपाईलाई तर्साउन सक्छ । अत्याउन सक्छ । दिक्दारी लाग्न सक्छ । मन खिन्न हुन सक्छ । यो तपाईको परीक्षा पनि हो । तपाईलाई आफुले सही काम गरिरहेको छु भन्ने आत्मविश्वासको जरुरी हुन्छ । कामले जब नतिजा दिन थाल्छ तब तपाईको प्रशंसा गर्नेहरु र तपाईको कामको मूल्याङ्कन गर्नेहरु बढ्दै जानेछन् । यो बाटो नेताका लागि अलि कठिन छ । कुन बाटो रोज्ने हो नेताले निर्णय गर्न सक्नु पर्छ ।
नेताजी तपाईँ के भन्नु हुन्छ त्यसले क्षणिक प्रभाव पार्छ तर तपाई जे गर्नुहुन्छ त्यसले दीर्घकालिन प्रभाव पार्छ । तपाईका भनाई र गराईमा एकरुपता छ वा भिन्नता जनताले टाढा बसेर हेरिरहेका हुन्छन् । भनाई र गराईमा एकरुपता ल्याउनु निकै कठिक काम हो । तर तपाईको भविश्य यसैले निर्धारण गर्छ । यहाँ तपाईको भविश्य मात्रै होइन जनताको भविश्य पनि जोडिएको छ । नेताजी तपाई हिजो कस्तो हुनुहुन्थ्यो अब त्यो धेरै महत्वको विषय रहेन । तपाई अब के गर्नुहुन्छ ? त्यो महत्वको कुरा हो । तपाईलाई चिन्न सजिलो छ । तपाईको सङ्गतले दर्शाउँछ तपाईको आदर्श के हो ? समाजका खराव र धुर्त मानिस तपाईको नजिक पुग्नेछन् त्यो स्वाभाविक हो । तर तिनले तपाईकोमा कुन स्थान पाउनेछन् त्यो महत्वको कुरा हो । तपाईको सोच खराव र असल विचको भेद छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ । तपाईको कर्मले खरावलाई निरुत्साहित र असललाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । त्यो तपाईको भनाईमा मात्रै होइन कर्म (काम)मा देखिदै जानुपर्छ । किनकि यहाँ धेरैको भविष्य अब तपाईको हातमा पुगेको छ ।
केही नेतालाई लाग्न सक्छ म कहिल्यै भ्रष्टाचार गर्दिन । हो, यस्ता नेताले भ्रष्टाचार गर्दैनन् तर नेताको काम यतिमै पुरा हुँदैन । तपाईको कार्यालय र कार्यकालमा भएको अनियमितता, शक्तिको दुरुपयोग, श्रोत साधनको उपयोग विहिनता, कर्म न्युनता, नतिजा निराशाजनक, नीति विधिको वेवास्ता आदिको दोष नेताको हो । नेताले आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै नगर्दा नेता योग्य ठहरिन सक्दैन । त्यसैले नेताजी ः तपाई किन नेता हुनु भयो ? अब कुन बाटो हिँडन चाहनु हुन्छ ? तपाईको अन्तर मनको आवाज के हो ? के तपाई साँच्चै जनताको हितमा काम गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाई यो स्थानमा हुनुको सार्थकता आगामी दिनमा पुष्टि गर्ने इच्छाशक्ति छ ? गरेर देखाउनु हुन्छ ? वा अरु जस्तै नेता भएर हुक्के, चम्मरेहरुले देवत्वकरण गरेकोमा मख्ख परेर चुलिदै जाँदा जनताको नजरमा गिरेको पत्तै नपाई सिद्धिने सजिलो बाटोमा हिँड्न रुचाउनु हुन्छ ? नेता जी जो इच्छा ।